Ndingayenza njani i-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndingayenza njani i-instagram?
Meyi 5, 2021 0 IiCententarios 358
Okwangoku, ukujoyina nayiphi na inethiwekhi yoluntu kulula kakhulu ukuyenza. Amaqonga ayile ujongano olulula kakhulu lokwenza njalo. Ukusukela i-Instagram ingene ezandleni zika-Facebook ngo-2012, unokuyijoyina kunye neziqinisekiso ezifanayo ozisebenzisayo kule nethiwekhi. Funda ngenkqubo yobhaliso engezantsi.
Dibana nonxibelelwano lobhaliso:
Unxibelelwano lobhaliso lwe-Twitter lulula kakhulu, lwenziwe luthotho lweebhokisi apho kuya kufuneka ufake uluhlu lweedatha eziceliweyo. Kuya kufuneka ubeke inombolo yefowuni okanye i-imeyile, igama elipheleleyo, igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Phezulu uya kubona ii icon zokungena ngeakhawunti yakho ye-Facebook.
Qalisa ukubhaliswa kweakhawunti yakho
Yiya kwiqonga le-Instagram okanye ukhuphele kwaye ufake usetyenziso kwisixhobo sakho.
Faka ulwazi abalucelayo kwiibhokisi. Uyabona ukuba, ukuba ziyafumaneka, oko kukuthi, khange zisetyenziselwe ukubhalisa ezinye iiakhawunti, uya kubona uphawu lokuvunywa kwibhokisi nganye.
Xa ingafumaneki, kuya kuvela i-X ebomvu eya kukuthintela ekusebenziseni loo datha.
Emva kokukhupha lonke ulwazi, cinezela "Bhalisa umsebenzisi".
Isikrini siya kuqhubeka sikubonise ibhokisi ukuze ubeke eyakho umhla wokuzalwa Kwaye wakugqiba, isikrini siza kukubonisa ibhokisi enesicelo sokufaka ikhowudi yokuqinisekisa enamanani amathandathu.
Le khowudi iya kufumana inombolo yefowuni okanye i-imeyile, ke kuya kufuneka ube nokufikelela kwezi xa ubhalisa iakhawunti yakho.
Nje ukuba ubeke ikhowudi kwaye iqinisekiswe, iphepha liya kuhlaziya kwaye likubonise uluhlu lweeakhawunti zokuqala ofuna ukuzilandela.
Ezi akhawunti ziya kungqinelana nabasebenzisi abadumileyo okanye iiakhawunti zobuntu ngenani elikhulu labalandeli. Phezulu kwesikrini uza kubona ibhokisi yokukhangela ukuze ufumane iiakhawunti ofuna ukuqala ukuzilandela.
Emva kokulandela iiakhawunti ozifunayo, skrolela emazantsi ephepha apho uza kubona khona i icon "qala".
Uya kwenza ntoni emva kokubhalisa kwi-Instagram?
Emva kokubhalisa iakhawunti yakho, uya kubona imeko yeakhawunti yakho ye-Instagram. Into yokuqala oza kuyibona yimifanekiso ekwimeko yexesha lenkangeleko. Olu luhlu lwamaxesha yindawo apho upapasho lwabantu obalandelayo kunye nabo ubalandelayo lufumaneka khona.
Unokubona amabali ala ma-akhawunti phezulu kumda wexesha.
Amanyathelo okuqala aya kujolisa ekuhleleni iprofayile yakho:
Fumana i icon yeprofayile yokuhlela ecaleni kwesithombe se
Uya kubona uthotho lweebhokisi ekufuneka uzigcwalisile
Guqula igama lomsebenzisi, beka iwebhusayithi, bhala intetho kunye nohlobo. Ukuba awuzange ubhalise ngenombolo yefowuni, unokuyibeka kwibhokisi ehambelana nayo.
Okokugqibela, beka iphrofayili ngokucinezela i icon "Guqula icon yeprofayile" ngezantsi kwegama lomsebenzisi.
1 Dibana nonxibelelwano lobhaliso:
2 Qalisa ukubhaliswa kweakhawunti yakho
3 Uya kwenza ntoni emva kokubhalisa kwi-Instagram?
4 Amanyathelo okuqala aya kujolisa ekuhleleni iprofayile yakho:
Ungayivimba njani iYouTube?
Ndiyi-odola njani ingoma kwiTwitch?